+७८४३२३०६५२० नम्बरको ठगी धन्दा : कतै तपाईलाई पनि ठगी रहेको छ कि ? «
+७८४३२३०६५२० नम्बरको ठगी धन्दा : कतै तपाईलाई पनि ठगी रहेको छ कि ?
प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७५, बिहीबार ०९:०३
काठमाण्डौ ।आजभोली प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै बिकृतिहरु पनि बढीरहेका छन् । हामीले कल बाइपास लगायत अन्य ठगीधन्दा बजारमा सुन्दै आएका छौ । बजारमा इन्टरनेटको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउनेको बिगबिगी छ । प्रविधिको दुरुपयोग गरेर मान्छेले मान्छेको बदनाम गरेको छ । पैसा लुटिएको छ । धेरैले अनेकथरी समस्या भोग्नु परेको छ । यस्तै एक समस्या भोगीरहेका छन, खोटाङका बिरेन्द्र राईले । काठमाण्डौस्थित कपनमा बस्दै आएका उनलाई हिजोअपरिचित नम्बर +७८४३२३०६५२० बाट मिसकल आयो । चिनेकैले गरे की भनेर मिसकल नै फर्काए । तर ८ रुपैया पैसा काटियो ।
यसपछि लगातार मिसकल आएपछि उनले फेरि त्यसैमा डायल गरे । नम्बर डायल गरे बित्तिकै फोन रिसिभ भयो तर केही आवाज आएन । यसरी झण्डै १० सेकेण्ड मै उनको ३० रुपैयाँ काटियो । कोही बोलेको आवाज नसुनिएपछि उनले यो कसैले ठगी गरिरहेको सोँचे । र, नम्बर डिलीट गरे ।
तर अहिले त झन् उनलाई छिनछिनमा त्यहि नम्बरबाट मिसकल आइरहन्छ । उनले फोन त गरेका छैनन् । तर मिसकल आइरहेकाले दिक्क बनाएको छ । बिरेनलाइ पटक–पटक मिसकल गरेर पैसा लुट्ने यो नम्बरले कतै तपाईलाई मिसकल गरेर सताएको त छैन ? यो नम्बरले अरु धेरैलाई सताइरहेको हुनसक्छ । तसर्थ सुरक्षा निकायले यो नम्बरको विस्तृत अनुसन्धान गर्नु जरुरी देखिन्छ ।